Maalinta: Meey 23, 2018
Unkapanı iyo Galata Bridges si ay u Furaan Gaadiidka Marinka
Buundada Atatürk (Unkapanı) sababo la xiriira dayactirka iyo shaqada dayactirka ee buundada 24 May 2018 Khamiista gawaarida 00.30'den 04.30'a iyo socodka dadku lugeynayaan waa la xiri doonaa. Ataturk Bridge iyo Buundada 'New Galata Bridge' [More ...]
Degmada Zeytinburnu, muwaadiniinta aan awoodi karin inay yimaadaan Cevizliwaxay u adeegi jirtay maraq kulul goobta loo yaqaan 'metrobus' iyo isgoyska taraamka. Muwaadiniintii furay meheradda oo ku adeegta maraqa la adeegay ayaa markaa wadadoodii ku aaday guriga. Dawlada Hoose ee Zeytinburnu, waa bisha Ramadaan [More ...]
Madaxa UDHB Suat Hayri Aka, Ku-Xigeenka Wakiilka Orhan Birdal iyo Agaasimaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 22 TCDD 4 ka dib markii barnaamijka Sivas uu ahaa Talaadadii Talaadadii. Wuxuu ka qaybqaatay barnaamijka Iftar ee uu abaabulay Agaasimaha Guud. [More ...]
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimadda Fazil Tamer, Isbaarooyinka Gaadiidka Dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ayaga oo baaritaano sameynaya wuxuuna uga digay darawalada inay qaadaan rakaab bilaash ah. Tigidhada elektiroonigga ah ee basaska iyo basaska dadweynaha ee Van [More ...]
Wicitaan dheeraad ah ee Wicitaanka ee Vanli
Waxaa jira yaraanta kale ee Vanlılar oo soo celisa baahida taraafikada joogtada ah iyo baahida loo qabo xalka joogtada ah ee gaadiidka dadweynaha. In kasta oo ay jiraan basas khaas ah, basas iyo basas caqli badan oo biloowday sannadaha soo socda [More ...]